PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-04-15 - USEZOQHUBEKA NOKUSAKAZA IKHUMBULEKHAYA
USEZOQHUBEKA NOKUSAKAZA IKHUMBULEKHAYA
Ilanga langeSonto - 2018-04-15 - Izindaba - makhoba@ilanganews.co.za
BAGCINE befinyelele esivumelwaneni abakhiqizi bohlelo oluyintandokazi KWISABC 1 ikhumbulekhaya, nomethuli walo u-andile Gaelesiwe, okubikwe ukuthi ubesabisa ngokululaxaza uma enganikwa iholo alifunayo.
Kuzokhumbuleka ukuthi ngenyanga edlule ILANGA Langeso
nto libike ukuthi isimo besingesihle phakathi kuka-andile nenkampani ekhiqiza ikhumbulekhaya, i-urban Brew, bekunokungqubuza ngendaba yeholo.
Ukushayisana kwabo kuze kwathikameza nokuqala kokuqoshwa kwesizini entsha yalolu hlelo, kwabuyiswa iziqephu zalo ezindala.
Ngolwesithathu kuleli sonto u-andile uqalile ukwethula isizini entsha yalolu hlelo, kwacaca ukuthi ingqinamba ebikhona igcine isonjululiwe. Ethintwa yintatheli YELANGA
Langeso-nto u-andile ngolwesine uvele washo ngohleko oluncane wathi: “Ngangishilo ukuthi ngeke ngishiye abalandeli bekhumbulekhaya kanjalo nje, kodwa angithandi ukuphawula ngezezimali njengoba ngangishilo nasekuqaleni ukuthi angivumelekile ukukhuluma ngezimali.”
Phambilini imithombo yayiveze ukuthi okususe ukungqubuzana phakathi kuka-andile nabe-urban Brew wukuthi u-andile ubesefuna ukwenyuselwa imali ifinyelele ku-r25 000 ngohlelo ngalunye, isuka ku-r15 000.
Okhulumela i-urban Brew ulawrence Molepo akathandanga ukuqinisekisa indaba yamaholo ngesikhathi ekhuluma NELANGA
Langeso-nto phambilini. Wathi leyo ithinta isisebenzi nomqashi.
ISITHOMBE NGABE: NEWS24.COM
UYAQHUBEKA nokusakaza ikhumbulekhaya u-andile Gaelesiwe.